डा.केसीको समर्थनमा इजरायलमा प्रदर्शन साथै बाढी पिडितहरुको लागी आर्थिक सहयोग संकलन « Pana Khabar
डा.केसीको समर्थनमा इजरायलमा प्रदर्शन साथै बाढी पिडितहरुको लागी आर्थिक सहयोग संकलन
समय : 1:47 am
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भैरहेको व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति र राजनीतिक भागवण्डालाई परास्त गरी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन भन्दै डा. गोविन्द केसी ११ अौँ पटक अनशनरत छन् । सरकारले यस अघि गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेको र विभिन्न बहानामा झुलाउने काम मात्रै गर्दै आएको हुँदा ११ औँ अनशन बसेका केसीको १८ औ दिन भएको छ।
यसै विषयलाई लक्षित गर्दै डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा सरकारलाई झकझक्याउन बैदेशिक रोजगार अन्तर्गत इजरायलमा कार्यरत केहि युवाहरुको आयोजनामा प्रदर्शन भएको छ।
डा.केसीको माग पूरा गर, ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलवाड हुँदैछ,चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर,तिन करोड नेपाली डा. केसीको पक्षमा छन् लेखेका प्लेकार्ड बोकेर तेलअभिब स्थित लेबिन्सेकी पार्कमा प्रदर्शन भएको हो।
प्रदर्शनमा एेक्यवद्धता जनाउँन एनआरएन इजरायलका निवर्तमान अध्यक्ष दिपक ओली, श्री सत्य साई केन्द्र इजरायलकी अध्यक्ष नेहा गुरुंग,शेर्पा संघ इजरायल को द्वितीय उपाध्क्षय डोमा शेर्पा र नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष रामशरण बाँनिया लगायत विभिन्न वक्ताहरुले डा.केसीको जायज माग तुरुन्त पुरा गर्न सरकारलाई आव्हान गरेका थिए।
प्रदर्शनका आयोजकहरुमा अर्जुन पौडेल,राज छत्कुली, सुबास खरेल, सन्दिप भण्डारी,सुन्दर नेपाल,दिपेन पौडेल, खगेश्वर अधिकारी,भोजराज क्षेत्री र राम ढुंगाना रहेका थिए।
उक्त प्रदर्शनमा नेपालमा बाढिपितिहरुका लागी आर्थिक सहयोग समेत संकलन गरिएको थियो। आर्थिक संकलनलाई अभियानकै रुपमा संचालन गरिने र संकलित रकम केहि दिनपछि बाढिले धेरै प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने निर्णय समेत भएको छ।
प्रकाशित : साउन २९ आइतबार-२०७४